तपाईं 10,000 कदम सिद्धान्त को सुनेको? धेरै डाक्टर मान्छे कम्तिमा 10,000 बारेमा9किलोमिटर दूरी बराबर छ जो एक दिन, कदम लिन प्रयास गर्नुपर्छ भन्छन्।
म कसरी थाह प्रत्येक दिन कति कदम के?
गतिविधिको आफ्नो वर्तमान स्तर मा निर्भर हुन्छ, यो दूरी ठूलो जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो तिर काम लायक छ। तपाईं छोटो अवधि एक साना, अधिक मूर्त परिणाम पुग्न छौँ गर्दा दूरी, एक दीर्घकालीन लक्ष्य रूपमा सेवा गर्न सकून् भनेर कुनै पनि गतिविधि, केही भन्दा राम्रो छ।
तपाईं कदम को संख्या गणना गर्ने आधुनिक उपकरणहरू साथै धेरै स्मार्ट फोन हिँड्न आवेदन छ। साथै, पारंपरिक Pedometers यी दिन पनि उपलब्ध छन्। कम से कम, यो के तपाईं आफ्नो दैनिक जीवन मा हो कसरी सक्रिय ट्रयाक राख्न अनुमति दिन्छ कि एक उत्कृष्ट उपकरण छ।
काम तपाईं आफ्नो खुट्टा मा एक पुरा दिन हुन भने, त्यसपछि 10 हजार कदम तपाईंको लागि एउटा समस्या बन्न असम्भाव्य छन्। तर तपाईं सबै दिन एक डेस्क मा एक कार्यालय बसेर भने, यो यो लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ भन्ने लाग्न सक्छ (यो छैन यद्यपि!)। तर, कदम को संख्या ट्रयाक, तपाईं, दिनमा लोकोमोटर गतिविधि वृद्धि र यस्तो काम मा पैदल यात्रा रूपमा आवश्यक परिवर्तन, बनाउन एक एरोविक्स क्लास एउटा यात्रा सट्टा सिढी एलिभेटर, प्रयोग एक उत्प्रेरणा प्राप्त हुनेछ।
10 हजार कदम को लक्ष्य को इतिहास
1960 मा भनिन्छ जो mano-केइ, जापान Pedometers थिए। जापानी यसलाई अर्थ "10,000 कदम"। तर हुनत वैज्ञानिक डाटा आधारित सिद्धान्त नै र, अध्ययन पैदल धेरै लाभ छ, र एक दिन हासिल गर्न राम्रो लक्ष्य हो 10,000 कदम भनेर देखाउँछ।
एक अध्ययन एक दिन कम्तिमा3किलोमिटर दूरी मा हिड्ने बारेमा आधा द्वारा कारण गंभीर पुरानो obstructive पल्मोनरी रोग hospitalization आफ्नो संभावना कम गर्न सक्छ कि फेला परेन।
अर्को अध्ययन उमेर 60 मा मानिसहरू एक दैनिक पैदल को माध्यम द्वारा स्ट्रोक को आफ्नो जोखिम कम गर्न सक्छ कि सुझाव। एक वा दुई घण्टा हिड्ने स्ट्रोक जोखिम, लगभग 30% द्वारा कम सक्छ पैदल टेम्पो बिना। एउटै अध्ययन 3-घण्टा पैदल 60% द्वारा यस जोखिम कम गर्ने देखाए।
पैदल निष्क्रिय र सक्रिय मान्छे को लागि आदर्श छ
पैदल वजन, या बस निष्क्रिय छन् जो मान्छे को लागि एउटा अचम्मको उपकरण हुन सक्छ, तर यो लाभ प्रदान गर्न सक्षम छ र ती जसको जीवनको मार्गमा हुनत - थप सक्रिय। यो अचम्मको उपकरण मात्र शारीरिक, तर पनि मानसिक स्वास्थ्य को लागि, उदाहरणका लागि, तनाव संग संघर्ष लाभ प्रदान गर्दछ।
अन्य थप तीव्र व्यायाम यस्तो एरोविक्स वा कार्डियो रूपमा प्रकारका विपरीत, तपाईं ठीक र एक आदर्श गतिविधि हिड्ने बनाउँछ कि एक पैदल आफ्नो दैनिक तालिका समावेश गर्न पछि आराम गर्न आफ्नो शरीर समय दिन आवश्यक छैन। यो तपाईंले केही किलो गुमाउन मद्दत गर्न सक्छ हुनत, यो मांसपेशी निर्माण गर्न सक्दैन। यद्यपि, यो विशेष गरी बुढेसकालमा, स्वास्थ्य कायम राख्न लागि उपयोगी उपकरण हो।
अधिकांश मानिसहरू एक दिन 10 000 कदम जाने छैन
पहिले नै उल्लेख, 10 हजार कदम - बारेमा9किलोमिटर। तर अधिकांश मानिसहरू पनि नजिक यो लक्ष्य प्राप्त गर्न आएको छैन। बेलायत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अनुसार, औसत व्यक्ति देखि34 हजार एक दिनमा कदम जान्छ।
एक Pedometer को प्रयोग किन यति उपयोगी छ भन्ने छ। यो तपाईं दिन र कसरी हामी अवस्था सुधार गर्न सक्नुहुन्छ समयमा जाँदैछन् कति को व्यावहारिक विचार दिन हुनेछ। के तपाईं साँच्चै सानो भने, नआत्तिनुहोस्। सानो सुरु र हरेक दिन 1000 मा कदम को संख्या वृद्धि। यो लक्ष्य सजिलै achievable छ। तपाईं जान, खुट्टा मा काम गर्न जाने, वा अरू खाना पछि पार्क मा एक पैदल लिन निर्णय भने हासिल गर्न सकिन्छ। वा तपाईंलाई वास्तवमा सार्न बनाउन किनभने, कुकुर प्राप्त गर्न सक्छन्। कति चाँडो तपाईंले यी नवाचारै मार्फत जाने कि कदम को नम्बर परिवर्तन तपाईं छक्क छौँ।
तपाईं पनि आफ्नो साथीहरु सँग आफ्नो उद्देश्य साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूले अतिरिक्त समर्थन र कम्पनी एक पैदल समयमा प्रदान गर्नेछ। यो तपाईंको मित्र मात्र होइन सुधार हुनेछ, तर पनि बाहिर खर्च समय बढ्छ। तपाईं थाह छ, खुला हावा तपाईंको स्वास्थ्य धेरै फाइदा दिन्छ।
अविश्वसनीय, तर अनुसन्धान तपाईं हरेक घण्टा कम्तिमा दुई मिनेट हिंड्न भने, तपाईं आफ्नो जीवनको अवधि 33% द्वारा, छैन जो मान्छे संग तुलना वृद्धि गर्न सक्ने सिद्ध भएको छ।
हिड्ने पनि तनाव कम
तनाव धेरै रोगहरु को एक प्रमुख कारण हो, त्यसैले यसलाई अक्सर भनिन्छ "मौन हत्यारा।" तर वैज्ञानिकहरू पैदल तनाव कम र बढी आराम र सजिलो महसुस महसुस गर्न मद्दत गर्छ कि सिद्ध गरेका छन्। अन्य अध्ययन पनि यो निराशा कम गर्न सक्छ कि देखाएका छन्।
यो स्वास्थ्य लाभ को एउटा अचम्मको नम्बर प्रदान एक सरल र प्राकृतिक गतिविधि छ। आज भन्दा बढी हिड्ने सुरु - र तपाईंले आफ्नो जीवन कसरी परिवर्तन गर्न देख्नेछन्।
के कदम लिएको हुनुपर्छ?
माथि उल्लेख रूपमा, प्रत्येक दिन धेरै कदम गर्छन्। निस्सन्देह, तपाईंले एक दैनिक आधार मा सही नम्बर ट्रयाक राख्न छैन, तर यो तपाईं वास्तवमा दिनको लागि मार्फत जाँदैछन् कति को एक विचार प्राप्त गर्न धेरै उपयोगी हुनेछ। तसर्थ, सुरु गर्नु पहिले आवश्यक कुनै पनि परिवर्तन एक Pedometer किन्न सुरु गर्न। साथै, यी उपकरणहरू सस्तो र प्रयोग गर्न सजिलो छन्।
कसरी छोराछोरीलाई लागि मोबाइल रिले पूरा गर्न
Marie-Laure Brunet: जीवनी र उपलब्धिहरू
को क्रिया को "अपील" को प्रयोग त्रुटिहरू - शब्द misinterpretation को परिणाम हो